Seho faran’ny herinandro
Na dia ny lalao baolina kitra CAN aza no mafana amin’izao dia tsy adino ihany koa ireo mpiala sasatra sy ireny tia manala azy amin’ny hetsika ara-javakato ireny. Ireto àry misy seho atolotr’ireo mpanakanto antsika.
Etsy amin’ny “Piment Café” Behoririka dia hiaka-tsehatra ao ny tarika “One Man Silo”, anio zomà manomboka amin’ny sivy ora alina.
Etsy amin’ny “Hôtel Le Glacier” Analakely kosa indray dia ny tarika Mikalo dia manolotra cabaret lehibe ho an’ny mpankafy azy, ny alakamisy 11 jolay manomboka amin’ny 8 ora alina.
Anio zomà 12 jolay manomboka amin’ny valo ora alina kosa dia ny tarika Manaly, manolotra “Grand Cabaret” ho an’ny mpankafy azy.
Ny sabotsy 13 jolay kosa dia manolotra Cabaret miavaka, miaraka amin’ny “Groupe” Jean Rigo manomboka amin’ny valo ora alina ao amin’ny Le Glacier hatrany.
Sitraka r .